Ezakwa Mhlaba – Nomakhavela Magazine
Ohlonipha u nembeza
Kunento eyenzekalayo empilweni yami ngisafunda isikole. Ziningi izinkinga ongena kuzona uma usakhula, ungene kuzo uphushwa umngani noma abangani okanye ungene kuzo ngokuhalela ukuzwa amanzi ngobhoko nokuba nengcindezi.
Nami kwathi sengibona ukuthi sekungilungele ukuba nenjeza noma umngani wami engangifunda naye waba nendima ayidlalayo, ukuthi ngingene kwezothando nakuba ngangiyaliwe ekhaya ukuthi ngingazimdakanyi.
Ngazithola nami sengisemathandweni lokho okwabeka ebathubeni okukhulelwa. Umngani wami futhi uye owangiyalela umuntu okwazi ukuhushula isisu ngoba ngangisaba iziyalo zabazali.
Nangampela ngiye kulomuntu akwenze konke ngempumelelo nakuba kwaba into eyangizwisa ubuhlungu emphefumulweni nasemzimbeni.
Ngalesikhathi ngathatha isinqumo sokuthi angeke ngiphinde ngibe sebudlelenanweni kuze kube ngiyasiqeda isikole ngisebenze njemgesifiso sabazali.
Lokho ngakwenza ngempumelelo ngasiqeda isikole ngasebenza nabazali bajabula. Kuthe kusenjalo abazali bangikhulula ukuba sengingamthola umkhwenyana vele wayesekhona enqodweni yami.
Zawushaya emini kwabha, ngahlala emzini wami. Kwase kuba nenkinga eyodwa eyavela emshadweni wami eyase ikhathaze abasemzini nasekhaya kithi, ukungatholi kwabantwana kwami.
Isazelo sangidla ngaphakathi kodwa ngakhetha ukuthula ngoba ngangesaba ihlazo ngento engayenza eminyakeni eyedlule.
Abakubo kamkhwenyana wami babengangithandi vele kwathi nalesimo naso sabanga isanywana kimi esikhulu ngoba babengithuka bengibiza ngesigqala, inyumba yomfazi.
Lawomagama angenza ngahamba ngedwana ngaya kudokotela owafika wathi anginankinga, angangakholwa kahle ngoba maningi amahlathi odokotela ongeke ubabone, ngaphinda ngaya komunye lowesibili wathi uyayibona inkinga angeke ngibe nabantwana.
Ngabona ukuthi udokotela wesibili uqinisile, yangethusa leyonto yangibangela ingcindezi ngendlela yokuthi ngase ngicabanga ukuzibulala.
Umkhwenyana wami kwakumuntu osabambelele emasikweni nabakubo ngoba ngelinye ilanga ngabikelwa ukuthi ngosuku oluthile kuyiwa enyangeni ezobhula.
Nami ngavuma nakuba ekhaya kithi sasingakaze sikhuleke emadlozini, ngakhuliswa ngomkhuleko.
Lwafika usuku lokuthi siye enyangeni, nebala safika kuyo inyanga, yathimula kabili kathathu yasho ukuthi ubona ingane ekhalayo efuna ukwenzelwa umsebenzi wayo, yabalula ukuthi iyo lengane evimbe ukuthi singabi namntwana emshadweni.
Yabuza inyanga kugcwele wonke umndeni ukuthi ubani osake waba nengane esake yadlula emhlabeni noma isisu esachithekayo, sabukana no mkhwenyana wami omunye womndeni esho ukuthi lizophuma iqiniso namhlanje.
Umzimba wami ngawuzwa ufudumala izithukuthuku zehla umkhwenyana wami wakhipha iduku wangesula, wabuza umkhwekazi ukuthi kwenze njani ngajuluka.
Nakuba lalishisa ilanga emnyango kodwa sasisendlini epholile, ngakhetha ukufela ngaphakathi futhi nemfihlo yami, ngabeka ukuthi isimo nami engangingalindele ukuthi singenzeka emshadweni wethu.
Umamezala wanginikeza amazwi okungeseka ukuthi ayi njengoba sasisenyangeni yonke into izolunga makoti.
Wabesecela inyanga isho ukuthi ingane eyachithekayo ekabani, yasho inyanga ukuthi ibifuna umuntu azisholo yena ingakashayi amathambo.
Yawaphosa futhi amathambo elinye lagqoma phezu kwekhanda lika mkhwenyana wami, yathi inyanga nizibonele inkinga ingaku ndodana.
Washo umkhwenyana owayesejuluke esemanzi naye ukuthi ikhona intombi yakhe esake yakhipha isisu esafunda isikole waxolisa kakhulu kumina nasemndenini wakhe ngokuthula nemfihlo enjengalena.
Nebala inyanga yawenza umsebenzi nangempela wokufaka ingane eyachithekayo emndenini, imiphumela emihle yabonakala ngempela námi ngaqala ukwethemba isiko ngoba samthola umntwana kwaba kuhle nabasemzini bangithakasela kakhulu.
Sengiphinde ngathola omunye umntwana wesibili inkinga yakhe uyagula ngendlela exakile sesizame yonke imizamo, sesiphinde sayalelwa ukubuyela enyangeni futhi.
Ithi ingabankulu ingabisazeka
Ngelinye ilanga umakoti wami wangitshena ukuthi kwakumele kesiye ekhaya kubo siyobona umama wakhe njengoba wayesanda kuphuma esibhedlela eshibilikile wanyela eqakaleni.
Nangampela yafika impela sonto amabombo sawabhekisa kubo kwamakoti wami.
Sisahamba endleleni angikhumbuze ukuthi kumele sicoshe umngenandlini, nangempela singene enxanxatheleni yezitolo.
Sesingaphakathi esitolo wadonsa inqola ye grosa enkulu ukuba ngiyiphushe. Inqola yagcwala ngokweqile.
Nebala saya emishinini ukuyokhokha, emveni kwalokho salayisha imithwalo emotweni sakhala semuka. Safika kwaba kuhle sajabula ukubona umkhwekazi eseluleme.
Sesibuyela emuva umakoti wami wakhombisa ukujabula okukhulu wangibonga waze wanconcoza.
Sekuthi ngelinye ilanga ngithole ucingo lokuthi umama wami uphethwe isisu siyamkhipha.
Ebese ngitshena umakoti wami ukuthi, kmele kesiye ngase khaya isalukazi sami asiphathekile kahle.
Nangempela singene umgwaqo, sacabanga ukuthi kumele siphathe umngenandlini, sabe sesingena ezitolo.
Umakoti adonse inqola encane, sithenge okumbalwa singene indlela sihambe.